GAADIIDKA RAILWAY | RayHaber | raillynews
Ilker Celikus, Gudoomiyaha Turk Ulas-Sen Branch, oo keenay eedeymaha ah in TÜDEMSAS lagu dari doono TULOMSAS iyo TUVASAS, wuxuu yiri: [More ...]
Maareeyaha Guud ee TCDD Ali İhsan Uygun maqaalka cinwaankiisu yahay 'Merhaba Hello to Sannadka Cusub Ra' waxaa lagu daabacay joornaalka Raillife ee Janaayo 2020. Waa kan maqaalka TCDD GENERAL MANAGER UYGUN Sannadka cusub, yoolalka cusub [More ...]
Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Bursa wuxuu ku yaal ajendaha Golaha Wasiirrada
Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Bursa ee Ajandaha Golaha Wasiirrada; Guddiga Gaadiidka, oo ay samayso Mehmet Albayrak, Madaxa Laanta Bursa ee Rugta Injineerada madaniga ah, ayaa hadafkeedu yahay in la soo bandhigo oo la bixiyo talooyin hoos yimaada lenska gaadiidka magaalada. Markii la soo dhaafay ında Markii jidadka tareenka laga qaadayo Buundada Cusgazi [More ...]
Adkeynta 'Gaaritaanka' iyo 'Gaaritaanka' ee Madaxweyne Sekmen
Mehmet Sekmen, Duqa Magaalada Erzurum Magaalo Weyn, ayaa yiri: "Waxaan ka dhigi doonnaa magaalada Erzurum magaalo la heli karo iyo sidoo kale magaalo la heli karo." Turkey oo co-maalgeliyey Midowga Yurub, Wasaaradda Gaadiidka iyo Kaabayaasha [More ...]
2,5 Milyan Muwaadiniin ah ayaa doorbida inay ku safraan Tareenka
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha M.Cahit Turhan ayaa sheegay in 3,7 milyan oo rakaab ah ay adeeg ka heleen garoomada diyaaradaha inta lagu gudajiray Ciidul Adxa, 4,1 milyan oo rakaab ah ayaa doorbiday basaska iyo 2,5 milyan oo muwaadiniin ah ayaa doorbiday inay ku safraan tareenka. Turhan, isaga [More ...]
Gaadiidka Tareenka ee Boqortooyada Ciraaq
Habka tareenka (siyaasada) ee Boqortooyadii Cusmaaniyiinta waa figradaha siyaasadeed ee xukumadihii Cusmaaniyiinta ku dhex lahaayeen xuduudaha Boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Qaababka dhismaha Wadooyinka Qaababka dhismaha wadada ee Boqortooyadii Cusmaaniyiinta, muddo dheer oo ku saleysan baahida militari, maamulada maxalliga ah [More ...]
Gaadiidka ka imaanaya Memur-Sen ilaa TÜDEMSAŞ
Kenan Caliskan Gudoomiyaha Sarkaalka Gaadiidka-Sen iyo Maareeyaha Laanta Sivas TÜDEMSAŞ Maareeyaha Guud Mehmet Başoğlu ayaa booqday xafiiskiisa. Kenan Çalışkan, oo ah Gudoomiyaha Sarkaalka Gaadiidka-Sen, wuxuu shaqeynayay tan iyo markii la asaasay TÜDEMSAŞ dalkeena. [More ...]
45 Boqolkiiba Kaabayaasha Electric Railway iyo digayaan in Turkey
Cahit Turhan, Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha, in la kordhiyo awooda wadooyinka tareenka, korantada, isgaarsiinta iyo kaabayaasha isgaarsiinta iyada oo la aasaasayo aaminka iyo xasilloonida sida ay yiraahdeen. Turhan, “Gaadiidka caadiga ah ee tareenka [More ...]
Goobta Qaran ee Qaran ee Taariikhda Tareenka ee Bozkurt iyo Karakurt
Degmooyinki ugu horreeyay ee Qaranka ee Taariikhda Waddada Tareenka ee Turkiga. Degmooyinkeenii ugu horreeyay ee maxalliga ah ee la yiraahdo Bozkurt iyo Karakurt hadda waa howlgab iyagoo sugaya booqdayaashood…. Haddii horumarinta warshadaha ee Eskisehir ay ahayd mawduuca halyeeyada [More ...]
Sababta shilalka tareenka ee ka dhacaya Istanbul?
CHP Yavuzyılmaz wuxuu la wadaagay baaritaankiisa ku saabsan shilka tareenka ee Florya oo uu la wadaagay BirGün wuxuuna sharaxay in shilkaas uu ka dhashay nidaam la'aan. Casharka Ders Casharka 9 shil ee Ankara [More ...]
Mashruuca Gaziray si loo kordhiyo Shaqada
Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Mehmet Cahit Turhan, mashruuca Gaziray oo ay la saxeexatay Dowlada Hoose ee Gaziantep, ayaa sheegay inay si wada jir ah u saxeexeen mashruucan, iyagoo sheegay in mas'uuliyiinta ay sida ugu dhakhsaha badan u dhammaystirayaan mashruuca. Xiriir taxane ah [More ...]
Khariidada Tareenka TCDD
Khariidadda Tareenka ee TCDD: TCDD waxay si joogto ah uga shaqeyneysaa labadaba cusboonaysiinta khadadka jira iyo isugeynta khadadka cusub. Gaar ahaan, tikniyoolajiyadii hore ee tareenka ee hadda jira iyo kuwo kaloo badan [More ...]